5F : hetsika hifamotoanan’ny mpino FJKM1 minutes de lecture
Hifamotoana eny amin’ny kianjaben’ny Mahamasina ny mpino FJKM ny tontolo andron’ny sabotsy 1 jona 2019 ho avy izao mandritra ny hetsika “5F”, izay tafiditra ao anatin’ny hetsika “Vontosy Filazantsara ny nosy Madagasikara”.
5F : hetsika voalohany sady miavaka
Hetsika voalohany miavaka. Tao anatin’ny tantaran’ny FJKM na Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara dia voalohany izao no hisy hetsika goavana toa izao. Ao anatin’ny vinan’ny fiangonana “Vontosy Filazantsara ny nosy Madagasikara” dia hisy ny asa fitoriana filazantsara lehibe hatao ao amin’ny kianjaben’ny Mahamasina ny tontolo andron’ny sabotsy 1 jona 2019. Ny tanjon’ny hetsika dia ny fitoriana filazantsara ho an’ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina.
Hisy ny hetsika maro hotanterahana mandritra io tontolo andro fitoriana ny filazantsara io. Ao ny lalao ara-panatanjahantena hifanatrehan’ny mpitandrina, diakona, mpanakanto avy eo an’ivon’ny fiangonana avy eto Antananarivo sy ny manodidina. Hisy ihany koa ny fitiliana tosi-drà, aretina diabeta ary ny VIH/SIDA.
Amin’ny maha asa fitoriana azy dia hisy ihany koa ny rindran-kira hiarahana amin’ireo mpanakato zanaky ny FJKM toa Ny Koraïta, Hosana, Mialy RAKOTOMAMONJY, Ampifitia, Ny Fanilo sy ny maro samy hafa.
Article précédent 5F : le grand évènement d’évangélisation de la FJKM
Article suivant La pauvre mentalité des Malgaches, frein au développement